Guushii ay ka gaareen Everton, dib u soo laabashada De Bruyne iyo Guardiola oo dhowr arimood ka hadlay – Gool FM
(Premier League) 15 Dis 2018. Pep Guardiola ayaa farxad weyn ka muujiyay guushii 3-1 ahayd ay kooxdiisa Manchester City kaga gaartay dhogooda Everton, kulankooda 17-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Manchester City ayaa 2 gool ku hormartay ciyaarta, kahor inta aysan Everton dhalinin goolka ay ku soo yareesay farqiga, laakiin Raheem Sterling oo badal ku soo galay ayaa ciyaarta ka dhigay 3-1.
Guardiola oo kulanka kadib la hadlay saxaafada ayaa ka hadlay dhowr arimood wuxuuna yiri:
“Ciyaartoyda waxay sameeyeen fal celin xoogan kadib guuldaradii Chelsea, ugu horeyn waxaan guul ka gaarnay Champions League kadib kulanka maanta ayaan badinay, kulanka wuxuu ahaa mid adag ee aan sahlaneyn”.
“Waa koox xoogan oo ay heystaan khibrad badan, waan ogeyn in ciyaarta ay tahay mid adag, waxay barbaro la galeen Chelsea, halka Liverpool ay kala kulmeen guuldaro daqiiqadihii ugu dambeesay ciyaarta”.
“Gabriel Jesus wuxuu sameeyay qaab ciyaareed fiican, aad ayaan ugu faraxsanahay isaga, wuxuu dhaliyay labo gool ee muhim ah”.
Intaas kadib macalinka reer Spain ayaa wuxuu ka hadlay dib u soo laabashada Kevin De Bruyne, kadib markii uu kasoo kabtay dhaawacii uu kaga maqnaa garoomada.
“Waxay inoo tahay muhiim inuu noo ciyaaro anaga, waa hubaal inuu ciyaari doono kulanka Leicester City ee Carabao Cup-ka”.
"Ma damin kartid oo xitaa Silent ma saari kartid.".- Barcelona oo Ganaax Yaab leh ku soo rogtay Dembele xilli uu....!!
Shaxda rasmiga ah kooxaha Torino Vs Juventus ee kulanka Turin derby